မဲဆွယ်ချိန် သမ္မ နဲ့အတိုင်ပင်ခံ အဆောင်အယောင်မသုံးဖို့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာမရှိအပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
မဲဆွယ်ချိန် သမ္မ နဲ့အတိုင်ပင်ခံ အဆောင်အယောင်မသုံးဖ...
28 พ.ย. 2562 - 10:42 น.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကလည်း သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့က ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်မယ်လို့ ထုတ်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မဲဆွယ်ချိန် သမ္မ နဲ့အတိုင်ပင်ခံ အဆောင်အယောင်မသုံးဖို့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာမရှိ
မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံတို့ရရှိထားတဲ့ အဆောင်အယောင်တွေ ကို မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာမရှိဘူးလို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်၊ မနေ့က လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။
"သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံတို့ကို ပေးထာတဲ့ ကားက သူတို့လုံခြုံရေးအတွက် နိုင်ငံတော်က စီစဉ်ပေးထားတာ၊ ဒီလိုစီစဉ်ပေးထားတာကို ဥပဒေအရတားထားတာမရှိဘူး။ ဒီလူတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်၊ ဒီပစ္စည်းတွေကို သုံးဖို့ပေးထားတာ၊ တားမြစ်တာမရှိဘူး" လို့ သူကပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ခုနှစ် အတွင်း အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ အရ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ မယ့်ရက်ကို ကြေငြာပြီးချိန်ကစပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ အပါ အဝင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ အဆင့်အထိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ရှိခဲ့ရင် ပါတီစည်းရုံး ရေးလုပ်ငန်း၊ နယ်မြေစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်း တွေကို လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
မွန်ပြည်သစ်တပ်နဲ့ တပ်မတော်တို့ ဂျပန်ရေတွင်းရွာမှာ စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ
နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအထိ မွန်ပြည်သစ်တပ်မြို့နယ်စခန်းနဲ့ ဂျပန်ရေတွင်း ရွာတဝက်ကို တပ်ဘက်ကသိမ်းပိုက် ထားကာ ကျန်တဝက်မှာ မွန်ပြည်သစ်တပ်တို့က တပ်စွဲထားတာကြောင့် နှစ်ဘက် စစ်ရေးတင်းမာမှုကတော့ ရှိနေဆဲလို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ စစ်ဦးစီးချုပ်ထံက ဘီဘီစီက မေးမြန်းသိရှိရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့ မနက် ၉နာရီကျော်၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ထဲမှာ နှစ်ဘက် ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး တပ်ဘက်က မွန်ပြည်သစ်တပ်ရဲ့ မြိုနယ်စခန်နဲ့ ဂျပန်ရေတွင်းရွာတဝက် ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။
တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေမှာပဲ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနက ဦးဇော်ဌေးနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ရရှိကာ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို တွေ့ဆုံဖြေရှင်းဖို့ မွန်ပြည်သစ်ဘက်က ပြောဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့ပေမယ့်လည်း ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာတွေက တပ်တွေကို လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဘဲ အခြေအနေတည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့သာ တိုက်တွန်းထားပြီး တွေ့ဆုံဖို့ကိုတော့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အဆင့်ဆင့် ဆက်သွယ်နေတုန်းလို့ နိုင်လရီကောင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"တပ်ဘက်က အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ရွာတဝက်နဲ့ မြို့နယ်စခန်းကို သိမ်းထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အင်အားနည်းတယ်၊ သူတို့ဘက်က အင်အားကများတယ် ၁၀ဆမကကွာတယ်လေ။ ပစ်ရင်တော့ ကာကွယ် ရမှာပဲ" လို့ နိုင်လရီကောင်းကပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်သစ်ဘက်ကတော့ သိမ်းသွားတဲ့ စခန်းရယ်၊ ရွာအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ တိုးချဲ့လာတဲ့ တပ်အင်အား တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
တပ်မတော်က ယခင်ကလည်း အရပ်ဝတ်နဲ့ ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်ကို လာရောက်မှုရှိပြီး မွန်ပြည်သစ် ဘက်ကလည်း လိုက်လံ ပို့ဆောင်ကူညီမှုတွေရှိပေမယ့် အခုတခါမှာတော့ စစ်ယာဉ်တန်းနဲ့ ယူနီဖောင်း အပြည့်အစုံနဲ့ လာခဲ့တာကြောင့် နှစ်ဘက်အကြားနားလည်မှုလွဲမှားတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ နိုင်လရီကောင်း ကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ထဲက ဂျပန်ရေတွင်းရွာနဲ့ ကျန်တောရွာ မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ ပြည်သူ ၅၀၀ လောက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆန်ခရဘူရီဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီထွက်ပြေးကြတဲ့ စစ်ရှောင်တွေက ဘုရားသုံးဆူ - ဆန်ခရဘူရီ ကားလမ်းဘေး ထိုင်းဘက်က ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေရတယ်လို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်က သိရပါတယ်။
အခုတိုက်ပွဲက ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတည်းက တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ထိုး ပြီးနောက်ပိုင်း တပ်နဲ့ မွန်ပြည်သစ်တို့ ပထမဆုံးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒီတိုက်ပွဲကလည်း ၂ ဘက် တပ်တွေအကြားမှာ နားလည်မှုလွဲမှားတာကနေ ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ တပ်ဘက် ကကော မွန်ပြည်သစ်ဘက်ကပါ ပြောထားပါတယ်။
ဘေဂျင်းအစိုးရကတော့ အပြင်းအထန်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်တာကို ရပ်တံ့ဖို့ တရုတ်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြနေသူတွေကို ထောက်ခံတဲ့ ဥပဒေကို ဒေါ်နယ်ထရမ့် အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုး
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဟောင်ကောင်က ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားထောက်ခံတဲ့ ဆန္ဒပြသူ တွေကို ကူညီပေးမယ့် ဥပဒေတရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေက ဟောင်ကောင်အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို သေချာစေဖို့၊ နှစ်စဉ် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး ကိစ္စတွေကို အထောက် အကူပြု နိုင်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရှီ၊ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူ ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကို လေးစားသောအားဖြင့် အခုလိုလက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ပြောဆိုပါတယ်။
အဲဒီအပေါ် ဘေဂျင်းအစိုးရကတော့ အပြင်းအထန်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်တာကို ရပ်တံ့ဖို့ တရုတ်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေအပြင် ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့က အသုံးပြုနေတဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းလိုဟာတွေကို တင်သွင်းခွင့်ကိုလည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းတခုကိုလည်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်က လက်မှတ် ထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါသေးတယ်။
အဲဒီပိတ်ပင်မှုတွေထဲမှာ၊ ရာဘာကျည်ဆံ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ဆန္ဒပြလူအုပ်စုတွေနိမ်နင်းရာမှာအသုံးပြုတဲ့ သေနတ်လို့ ပစ္စည်းမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မဲဆွယ်ချိန် သမ္မ နဲ့အတိုင်ပင်ခံ အဆောင်အယောင်မသုံးဖို့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာမရှိအပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ